StrictlySlots.eu Tablet Mobile & အွန်လိုင်း | စည်းစိမ်ဥစ္စာ slot Sensation | အခမဲ့မိုဘိုင်း App ကို
May 1, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ
ဗြိတိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးကာစီနိုအာဘော်အားဖြင့်ဆုချီးမြှင့်သောစပျစ်ရည်အခမဲ့ slot ကာစီနိုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ဂျိမ်းစိန့်. ယောဟနျသ Jnr. ဘို့ StrictlySlots.eu
တဲ့အခါမှာကအခမဲ့နှင့်စွဲလမ်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုဂိမ်းလွှတ်မှကြွလာ, Genie လည် တကယ်သူတို့အဘို့ရှာကြသည်အဘယျသို့လောင်းကစားရုံနိူးပေးဖို့ပျက်ကွက်ပါဘူး. သို့သော်, အဟိုက်ဘရစ်ဘင်ဂိုကစား-slot နှစ်ခုဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ဝယ်ယူ, Slingo စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့အသုံးပြုသူများကတီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်အခုလဲပေါ်နေရာချသောကြီးမားအရေးပါမှုကိုပြသ’ လောင်းကစားရုံအတှေ့အကွုံ.
စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်’ ကျော်ကြားမှုက start ကနေသိသာခဲ့သည်. ၎င်း၏နှိမ့်ချ Facebook ကစတဲ့ကြီးမားတဲ့အောက်ပါရရှိမှုကနေရပ်တန့်ဘူး, နောက်ပိုင်းသန်းပေါင်းများစွာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သော. ထိုအခါ ICE မှာဟောပြော၏မျက်လုံးနှင့်မျက်နှာသာဖမ်း 2015 '' ဂိမ်းဒီဇိုင်း & တိုးတက်ရေး’ အစည်းအဝေး, ထိုသို့အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာ “2015 ခုနှစ်တွင် Watch မှဂိမ်း”, အကိတ်မုန့်ပေါ် icing အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သာ.
Slingo စည်းစိမ်ဥစ္စာနောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများစု’ အောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မှစွပ်စွဲနိုင်, ရိုးရှင်းတဲ့, မြန်ဆန်ဂိမ်း. တူတာ အစဉ်အလာဘင်ဂိုကစား, အသုံးပြုသူတစ်ဦးက5ပေးထား×5 အသီးအသီးကြွေပြားပေါ်မှာကျပန်းနံပါတ်များနှင့်အတူဇယားကွက်. အဆိုပါလောင်းကစားရုံရှုထောင့်ကိုတိုက်ရိုက်ဇယားကွက်ကိုအောက်တွင်တည်ရှိ 5-ရက်ကြောင့်မှားယွင်း slot နှစ်ခု၏ပုံစံအတွက်လာ. ပဌမ, သငျသညျအလောငျးအစားရန်သင့်အားရည်ရွယ်သောငွေပမာဏကိုနေရာချရန်ရှိသည်. သငျသညျ£ 100 အမြင့်ဆုံးမှ 50p တက်၏နိမ့်ဆုံးအဘို့အအလောင်းအစားနိုင်.
ခပ်သိမ်းသောအလိပ်နှင့်အတူ, သင်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာသောနံပါတ်များနှင့်အတူဇယားကွက်ပေါ်နံပါတ်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ရှိသည်. သင်တစ်ဦးကိုက်ညီတဲ့အရေအတွက်ထိပြီးတာနဲ့, အလိုအလျောက်ပယ်မှတ်သားနှင့်တစ်ဦး '' စတားသို့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်’ သင်္ကေတ. ရယူခြင်း5ဒေါင်လိုက်ဖြောင့်သောကြယ်, ထောင့်ဖြတ်, သို့မဟုတ်အလျားလိုက်သင်တစ်ဦး Slingo ဝင်ငွေမယ်လို့. သငျသညျထိပိုပြီး Slingos, ပိုပြီးသင်ဇယားကွက်ဘေးရှိအနိုင်ရရှိမီတာကိုတက်ပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးအဂွဲရိုးအပြည့်အဝအောက်လွှတ်တော်အနိုင်ရရ. ဒါကဒီဂိမ်းဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတဲ့င်! တဖန်သင်တို့နှင့်အတူစစ်မှန်သောပိုက်ဆံအနိုင်ရများပြားနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားရန်!